'अब फुटसलका गतिविधि बढेकाे सुन्न पाईन्छ' - Khelpati
'अब फुटसलका गतिविधि बढेकाे सुन्न पाईन्छ'
बुधवार, श्रावण २९, २०७६ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । तुर्केमिनिस्तानमा आयोजना हुने सन् २०२० को एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनोट प्रतियोगितामा नेपालले समेत खेल्दैछ ।
प्रतियोगिता खेल्न नेपालले इरानमा हुने साउथ तथा सेन्टर जोनबाट छनोट हुनुपर्नेछ । छनोटका लागि नेपाल समूह एमा छ । समुहमा चार पटकको उपविजेता टिम उज्वेकिस्तान, ताजकिस्तान र अफगानिस्तान रहेका छन् । नेपाल रहेको समुह निकै बलियो छ ।
इरानमा आयोजना हुने छनोट प्रतियोगितामा सहभागीता जनाउन नेपालको राष्ट्रिय फुटसल टिमको छनोट सुरु भएको छ । यसअघि प्रतियोगिता आयोजना गरेर छनोट हुने गरेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको फुटसल कमिटिले खुल्ला छनोटबाट राष्ट्रिय टिम बनाउने तयारी गरेको छ । कमिटिले ५ दिनको छनोट पश्चात प्रारम्भिक फुटसल टिमको टुङ्गो लगाउनेछ ।
एन्फामा नयाँ कार्यसमिति आएको झण्डै डेढ बर्षपछि फुटसल कमिटिले पहिलो पटक छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो । फुटसल सञ्चालन गर्न एन्फाको छुट्टै फुटसल कमिटि छ । यता राखेपले समेत छुट्टै फुटसललाई सञ्चालन गर्दै आएको छ । राखेपले पछिल्लो बर्ष फुटसल संघलाई अर्जेन्टिनामा आयोजना भएको विश्वकपमा सहभागीता गराएको थियो । जुन फुटसल प्रतियोगितालाई फिफा र एएफसीको मान्यता रहदैन ।
त्यसैेले अर्जन्टिनामा सहभागी खेलाडीले फिफा र एएफसी मातहत चल्ने फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् ।
एन्फाले फुटसल कमिटि गठन गरेपनि घरेलु खेलकुदमा फुटसलका गतिविधि किन अघि बढ्न सकेन ? एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालको तयारी कस्तो रहन्छ ? यिनै बिषयमा फुटसल कमिटिका संयोजक दाबा लामासंग खेलपाटीकर्मी रमेश सुबेदीले कुराकानी गरेका छन् ।
प्रतियोगिताका लागि खेलाडीको खुल्ला छनोट गर्नुभएको छ । छनोटको आधार के राख्नुभएको छ ?
सुरुमा छनोटको सुचना निकाल्यौ । पहिलो चरणमा २ सय जति देखेका छौ । सिधै छनोट गर्ने छैनौ । सुरुमा १०–१० मिनेट समय दिएर खेलाएका छौ । कुन खेलाडीले कुन सेन्सले खेल्छ, पहिलो चरणमा खेल्ने सेन्स हेरेर छनोट गर्नेछौ ।
खुल्ला छनोट गर्नुभएको छ । खेलाडी कम भएर हो ?
थोरै भएर हैन । ५ दिनको समय दिएका छौं । सबै खेलाडीलाई एकै दिनमा बोलाएका छैनौ । खेलाडी बढ्दै जान्छन् । एकै पटक बोलाउन सम्भव पनि छैन । सबैलाई एकैपटक बोलाउदाँ व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । ठाउँ सानोे छ । आफ्नो मैदान नहुँदा समस्या आएको छ ।
छनोटबाट प्रारम्भिक चरणमा कति खेलाडी अट्नेछन् ?
पहिलो चरणमा ३० देखि ३५ खेलाडी भनेका छौ । एएफसीमा नाम पठाउँदा २५ मात्रै पठाउनुपर्छ । सुरुमा ३० खेलाडीको अन्तिम छनोट गर्छौ ।
खेलाडी छनोट टर्फमा भईरहेको छ । प्रतियोगिता म्याटमा खेल्नुपर्ने हुन्छ । तयारी कसरी अघि बढ्छ ?
टर्फको मैदान धेरै छ । म्याट थोरै छ । म्याट स्वयम्भु, भक्तपुरमा मात्र छ । आवश्यक पर्ने स्थानका लागि पत्र पठाएका छौ । तयारी म्याटमै हुन्छ ।
खेलाडी छनोट सुरु गरिसकेको छौ । तर अहिलेसम्म किन मुख्य प्रशिक्षकको टुंगो लाग्न नसकेको हो ?
छनोट सकेर प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने तयारी छ । फुटसल प्रशिक्षकबाटै खेलाडी छनोट गरिरहेका छौ । त्यहीबाट एक उत्कृष्ट छनोट गछौ । त्यसैले सुरुमै प्रशिक्षक छनोट नगरेको हो । सबैसंगको छलफलबाट सो निर्णय लिएका हौ ।
पछिल्लो समय एन्फाको फुटसल कमिटिको गतिविधि शुन्य प्राय देखिन्छ । किन निस्कृय बस्नुभएको ?
हो, हाम्रा गतिविधि सुन्य छन् । एएफसीले हाम्रा मापदण्ड तोकिदिएको छ । त्यो अनुसार मैले काम गर्न पाएको छैन । त्यही कारण पछाडी परेका हौ । अब त्यो हुदैन । सबै कार्यविधि र नीति तथा कार्यक्रम एन्फा समक्ष पेश गरेको छु । अब त्यसमा रोक नहोला । अब फुटसलका गतिविधि सुन्न पाईन्छ ।
पछिल्ला समय राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका खेलाडी फुटसलको छनोटमा कत्तिको आएका छन् ?
आएका छन् । पहिलो दिन समेत देख्न पाईयो । पहिलेका केही खेलाडी पलायन भईसके । केही बाँकी रहेका पहिलेका खेलाडीलाई समेत तेस्रो चरणबाट बोलाएका छौ ।
शीर्ष डिभिजनका क्लबका खेलाडीको आकर्षण कस्तो छ ?
आएका छन् । थ्री स्टार, सरस्वतीबाट खेलेका खेलाडी आईसकेका छन् । सागका लागि तयारी गरेका खेलाडी समेत आएका छन् ।
नेपालसंग साफ खेल्ने अफगानिस्तानको उमेर समुहको टिमले एएफसी च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्यो । तर नेपालमा भने अझै पनि फुटसलका गतिविधि हुन सकेको छैन नि ?
अवका दिनका नेपाली फुटसलका कुरा गर्दा शुन्य भएको कुरा सुन्न पाउनु हुन्न । धेरै समयको अन्तरमा आएका छौ । विभिन्न लिग प्रतियोगिता भए । प्रदेश लिग, जिल्ला लिग सञ्चालन भए । अब फुटसल समेत त्यसरीनै अघि बढाउन चाहन्छौ । अफगानिस्तान र इरान भन्ने त हैन । हाम्रो अवस्था उनीहरुको जस्तो छैन । अब काम सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकमा राखेपले फुटसल संघ चलाउने उल्लेख छ । त्यस अवस्थामा फुटसल कमिटि के हुन्छ ?
राखेपले जुन किसिमले राष्ट्रिय टिम बनायो । त्यो मैले फिफा र एएफसीसँग पनि कुरा गरे । उनीको सरकारबाट चल्ने प्रतियोगिता हो । त्यसमा हाम्रो हात हुँदैन भनेको छ । विश्वमा फुटसल र फुटबल फिफा र एएफसीबाट संचालन हुन्छ । सरकारले आफ्नै तरिकाले फुटसल चलाउछ । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हुदैन ।
नेपाल रहेको समुहमा निकै बलिया टिम छन् । कसरी लिनुभएको छ ?
सहभागी भएपछि छनोट हुनेनै हो । चाँडै खेलाडी छनोट सकेर म्याटको तयारीमा जुट्छौ । सहयोगका लागि एएफसीबाट समेत प्रतिनिधि आउनेछन् । उनीहरुले फुटसलका गतिविधि सिकाउने छन् ।
फुटसलका नियम थाहा नपाउँदा सुरुवाती धेरे खेल बिग्रिएका छन् । त्यसलाई सच्चाउन एएफसीका प्रतिनिधि नेपाल आउदैछन् । प्रतियोगिता अघि दुई देशसँग मैत्रिपुर्ण खेलका लागि समेत प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपमा नेपालको लक्ष्य के हुन्छ ?
हाम्रो लक्ष्य भनेको दोस्रो चरणमा पुग्नेनै हो ।